In ka badan Boqol qof oo lagu dilay Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
In ka badan Boqol qof oo lagu dilay Itoobiya
Itoobiya ayaa ku socota waaddo ah in dalkaasi uu galo dagaal Qowmiyadeed.
Guddiga Xuquuqda Aadanaha dalka Itoobiya ayaa sheegay in kooxo hubeysan ay in ka badan boqol qof ku dileen deegaanka Benishangul-Gumuz ee galbeedka Itoobiya.
Guddiga oo saaray bayaan ay dhacdadan uga hadlayaan ayaa sheegay in subaxnimadii Arbacada ahayd uu weerarkani ka dhacay tuulada Bekoji oo ah meel ay ku nool yihiin dad isir ahaan kala duwan.
Gashu Dugaz oo ah Sarkaal ka tirsan Hay’adaha ammaanka Itoobiya ayaa wakaaladda Wararka Reuters u sheegay in laamaha ammaanku ay si dhow ula socdeen weerarka dadka lagu laayay ee Benishangul-Gumuz haatanna ay dabagal ku hayaan dadkii falkaas geystay iyo xaqiijinta dadkii ku geeriyooday weerarka.
Waxaa sanadihii u dambeeyay isa soo tarayay cabashada qowmiyadda Benishangul ee ku aaddan in beeraleey iyo ganacsato ka soo tallaabay gobolka Amxaarada ee la deriska ah ay boob ku hayaan dhulka qowmiyadda Benishagul.
Weerarka dhiigga badani ku daadday ee ka dhacay deegaanka Benishangul-Gumuz ayaa imanaya maalin un kaddib booqashadii ra’iisul wasaare Abiy axmed iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ku tageen deegaankaas iyaga oo wada baaq nabadeed lagu xoojinayo xasilloonida gobolkaas.
Doorashooyinka la filayo in dalkaasi ay ka dhacaan sanadka foodda inagu soo haya ayaa sare u qaaday colaadaha iyo rabshadaha ku salaysan xukunka, siyaasadda dhulka iyo kheyraadka.
Ciidamada dowladda ayaa todobaadyadii ina dhaafay gobolka Tigray dagaal khadhaadh kula galay jabhadda TPLF oo ka biyo diiddan siyaasadda ra’iisul wasaare Abiy Axmed uu ku hagayo dalka Itoobiya.
Dagaalka gobolka Tigray ayaa sababay geerida dad aan tiradooda si rasmi ah loo ogayn iyo barakaca 950.000 oo qof.